WIN OSHE Services Student Services - WIN OSHE Services
Validate Certificates Issued by WIN OSHE Safety Academy
Certificates issued by WIN OSHE Safety Academy can be validated for the authenticity. Please click the link below to access the certificate validation service page.
Validate WIN OSHE Safety Academy Certificates
Validate Certificates Issued by OSHAcademy USA
Certificates issued by OSHAcademy USA can be validated for the authenticity. Please click the link below to access the certificate validation service page. You will be redirected to OSHAcademy USA site.
ဝင်းအိုရှီ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုသိပ္ပံ
WIN Occupational Safety, Health, Environment Academy (WIN OSHE)
WIN OSHE Safety Academy သည် ပြည်ပ Institutions များနှင့် ပူးပေါင်း၍ှနိုင်ငံတကာ အဆင့်အတန်းမီ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ရာ ရောဂါ ကင်းရှင်းရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများကို ရန်ကုန် မြို့တွင် ၂၀၁၂ ခုမှ စတင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သော Academy ဖြစ်ပါသည်။
WIN OSHE Safety Academy သည် ပြည်ပမှ မဟာဘွဲ.ရ၊ အင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်ဆရာများ၊ Safety Professional အဖြစ် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူများ၊ IRCA Approved Lead Auditor ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသည့် Registered Safety Professional, Registered Safety Officer, Registered WSH Officer ( MOM, Singapore), Registered Environmental Control Officer ( NEA, Singapore), Fire Safety Management ( SCDF, Singapore), Senior SHEQ Auditors များကိုယ်တိုင် သင်တန်းပို့ချလျှက်ရှိသော တခုတည်းသော မြန်မာ Safety, Health, Environment and Quality Institute ဖြစ်ပါသည်။
WIN OSHE Safety Academyသည် World Safety Organizationမှ မြန်မာနိုင်ငံ ရုံးခွဲအဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ် တာဝန်ပေးအပ် ခြင်းခံရသည့် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး သိပ္ပံ ဖြစ်ပါသည်။
WIN OSHE Safety Academy မှ ပို့ချလျှက်ရှိသော သင်တန်းများ
- လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အရာရှိ သင်တန်း ( OSHAcademy, USA)
- မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အရာရှိ၊ မန်နေဂျာ သင်တန်း ( IBOEHS, USA)
- ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001- Lead Auditor, Internal Auditor သင်တန်း ( Avanta Global, Singapore)
-Professional Diploma in Health & Safety ( Reading Colloege, UK & Career Core Institute)
-Food Safety, GMP, HACCP , Certified Food Protection Manager ( NEHA,USA)
-Risk Assessment, Process Hazard Analysis, QRA, FTA, ETA, FMEA
-Working At Height Safety ( Telecom, Construction)
-Defensive Driving ( World Safety Organization, Myanmar )
-Electrical Safety ( World Safety Organization, Myanmar )
-Fire Safety ( World Safety Organization, Myanmar )
-M& E Safety ( World Safety Organization, Myanmar )
-Safety Training for Pest Control Services (World Safety Organization, Myanmar )
-Warehouse and Transportation Safety (World Safety Organization, Myanmar )
-Emergency Spill Kit Operation (World Safety Organization, Myanmar )
-Occupational First Aid (World Safety Organization, Myanmar )
-Office Safety (World Safety Organization, Myanmar )
-Industry Hygiene (World Safety Organization, Myanmar )
-ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးသင်တန်း
-Mine Safety,Oil & Gas Safety,Construction Safety,Shipyard Safety,Manufacturing Safety
သင်တန်း တက်ရောက်လိုသူများ Phone 0979 3899 665, 0996 4055 776 email: [email protected] သို့စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
95 Insein Road, 4th flr., San Yeik Nyein, Kamaryut Tsp. Yangon, Myanmar ... See MoreSee Less
WIN OSHE Safety Academy shared Career Core Institute's post.
Professional Diploma - Health and Safety သင်တန်း တန်းခွဲအသစ်ကို WIN OSHE Safety Academy နှင့် Career Core Institute တို့ ပူးပေါင်း၍ August လ တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သော Occupational Safety and Health Field ထဲသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် လက်ရှိ Safety, Occupational Safety and Health, Health Safety and Environment တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများအတွက် Professional Diploma in Health & Safety သင်တန်းကို August လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် WIN OSHE Safety Academy နှင့် Career Core Institute တို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Professional Diploma in Health & Safety သင်တန်းကို တတ်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်
- စက်ရုံအလုပ်ရုံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင် မည်သူမဆို လုပ်ငန်းခွင် အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို နံပါတ် (၁) ဦးစားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း နည်းလမ်းများ
- လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ကြုံတွေ့လေ့ရှိတဲ့ မတော်တဆမှုများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ကာကွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ ဖြေရှင်းနည်းစနစ်များ
- မီး၊လျှပ်စစ်နှင့် သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်အနေအထားများကို သိရှိနားလည်နိုင်ပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း နည်းလမ်းများ
အစရှိသည့် Health and Safety နှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို နည်းစနစ်ကျနစွာ သင်ကြားပေးသွားမယ့် သင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု သင်တန်းကို တက်ရောက်ပြီးစီးပါက အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့် College ဖြစ်တဲ့ Reading College, UK မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်မည့် Professional Diploma ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၅) ပတ် ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဤ Professional Diploma in Health & Safety သင်တန်းကို
-Safety Knowledge ကို Upgrade လုပ်လိုသော Safety Manager များ၊
- Safety Officer၊ Supervisor များ-
-Construction လုပ်ငန်း နှင့် စက်ရုံ အလုပ်ရုံ များရှိ Health and Safety ကို တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေသူများ၊
-Construction လုပ်ငန်း များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းများ၊
-ဟိုတယ် များရှိ Maintenance ၀န်ထမ်းများ၊
-Health and Safety နှင့် ပတ်သက်သော ပညာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအားလုံး တတ်ရောက်သင့်ပါတယ် ။
Detail Information for Professional Diploma in Health & Safety
Starting Date – 12.8.2018
Day – Sunday Only (Whole Day Class)
Place – No.28, Aung Zay Ya Street, Kyauk Kone, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
School Fee – MMK 400,000
Registration Fee to Reading College - £ 105
Documents Fee – MMK 25,000
Assessment Type – Assignment
သင်တန်းအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက Career Core Institute သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ဖြစ်စေ ဖုန်းနံပါတ် 09450335500, 09770335500 (ရုံးချိန်အတွင်း) ၊ 09420028053 (ရုံးချိန်ပြင်ပ) သို့ ဖြစ်စေ [email protected] သို့ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
သာယာလှပသော နေ့ရက်လေးများကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။
#careercore #institute #healthandsafety #singlesubjectdiploma #diploma #readingcollege #uk
No.28, Aung Zay Ya Street, Kyauk Kone, Yankin Township, Yangon, Myanmar.
Ph - 09450335500, 09770335500 ... See MoreSee Less
WIN OSHE Safety Academy added4new photos.
WIN OSHE Safety Academy & International Board of Environmental Health & Safety (USA) would to congratulate New Registered Safety Officers! ... See MoreSee Less
Maturity models and safety culture ... See MoreSee Less
Planning labour evacuation for construction sites using BIM ... See MoreSee Less
HP: (+95) 93609 1909
HP: (+95) 94283 12573
HP: (+95)97938 99665
Copyright © 2016-2018 - All Right Reserved - Win OSHE Services Co.Ltd.